QORMADA JIMCAHA: Labo Laacib oo CAAN ka ah kubbada cagta oo Ka baxay DIINTA ISLAAMKA…(Ogoow Sababta) – Gool FM
QORMADA JIMCAHA: Labo Laacib oo CAAN ka ah kubbada cagta oo Ka baxay DIINTA ISLAAMKA…(Ogoow Sababta)
(Europe) 30 Maarso 2018. Qormooyinkeenii hore ee Maalinka Jimcaha haddaan ku soo qaadanay ciyaartooy soo islaamtay, waxaan Maanta qodobkeena ku soo qaadan doonnaa Labo Laacib oo aad looga yaqaano kubbada cagta oo Gaalowday kana baxay Diinteena Suuban.
Cisse wuxuu u soo ciyaaray kooxo badan waayihiisa ciyareed oo ay ka mid yihiin Auxerre, Liverpool, Marseille, Sunderland, Panathinaikos, Lazio iyo Queens Park Rangers, balse nasiib darro waxaa ka jabay labada lugood.
Markii hore wuxuu jabay isagoo Premier League u ciyaaraya Liverpool kulan ay la ciyaareen Blackburn Rovers , markii labaadna wuxuu u ciyaarayay xulka Faransiiska kulan ay ka hortageen Shiinaha. Cisse ayaana ciyaaraha isaga fariistay 2015 isagoo 34-jir ah.
Djibril Cisse ayaa ku dhashay dalka Faransiiska 12-kii August 1981. Wuxuu heystay Diinta Islaamka tan iyo 2007 ka hor inta uusan qaadan Diinta Chiristian ka.
Sababta uu u gaaloobay Cisse ayaa la aaminsan yahay inay tahay saamentay ay ku yeelatay Jude Litter oo markaa xaaskiisa ahayd.
Waxay ahayd gabadha timaha u sameysa, Lamaanaha ayaa isku guursaday Bodelwyddan Castle, Xaflad wayn oo lagu casuumay xiddigo waa wayn sida Steven Gerrard, David Beckham iyo Zinedine Zidane.
Yeelkeede, Lamaanaha ayaa kala tagay 2012-dii kaddib 7-sano ay is qabeen.
George Weah waa mid ka mid ah xiddigaha ugu fiican ebid taariikhda kubbada cagta Afrika wuxuu dhashay 1-dii Oktoobar 1966, wuxuu ahaa Chirsitian ka hor inta uusan qaadan Diinteena Islaamka oo uu 10-sano ku dhaqmayay, balse Nasiib darro waxaa la sheegay inuu ka baxay Diinteena suuban oo uu dib u qaatay Diinta Chiristian ka.
Weah oo iminka ah Madaxwaynaha dalka Liberia ayaa intii uu ku jiray saaxada Siyaasadda iyo ololaha Madaxtinimada laga hayaa inuu marar badan yiri inuu rajeynayo inay Nabad ku wada Noolaadaan Muslimiinta iyo Gaalada.
Wuxuuna Marar badan sheegay inay yihiin Hal Qoomiyad, taa oo ku tusineysa inaysan culeys ku heyn diintuu heysto.
Wuxuu ku guuleystay abaal marinta Ballon d’Or 1995 taa oo ka dhigeysa inuu yahay Afrikaankii ugu horreeyay uguna dambeeyay ee ku guuleysta abaal marintaas.
Arsene Wenger oo uu abaal badan u hayo ayaa keenay Yurub kolkaa uu ka talinayay naadiga Monaco ee dalka Faransiiska 1988.
Wuxuu intaa kaddib u soo ciyaaray kooxo ay ka mid yihiin Paris-Saint Germain, AC Milan, Chelsea, Manchester City iyo Marseille ka hor inta uusan ciyaaraha ka fariisan 2003 isagoo 37-jir ah.
DAAWO: ''Ukun haku jiro hadduu doono, hadda kaddib ka hadli maayo qandaraas kordhin ee iga daaya!'' - Gattuso
MUSHTARI MESSI: Lionel Messi oo hoteelkii 2-aad ka iibsadey dalka Spain + Sawirro